BusyBox 1.32 iri pano uye ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura kuvhurwa kwepakeji yakakurumbira «BusyBox 1.32» yakaunzwa zvinova kumisikidzwa kweUNIX zvinoshandiswa standard yakagadzirirwa se chikuru chishandiso mukurwisa kutyorwa kweGPL mu firmware.
Iyi pasuru inozivikanwa nekuve imwe chete inogoneka faira uye yakagadziridzwa kushomeka kwekushandisa kwesisitimu zviwanikwa zvine pasuru saizi isingasviki 1 MB.
Iyi vhezheni itsva 1.32 yakamisikidzwa senge isina kugadzikana vhezheni, uye kugadzikana kwakazara kunotarisirwa kupihwa mushanduro 1.32.1, inotarisirwa mukati memwedzi.
Kune avo vasingazive nezveBusyBox, vanofanirwa kuziva izvozvo zvinoita kuti zvikwanise kugadzira yakabatana inoitisa faira iine inopokana seti yezvishandisos inoitwa mupakeji (chinhu chimwe nechimwe chinowanikwa sechinongedzera kune ino faira).
Saizi, kuumbwa, uye mashandiro eunganidzwa yekushandisa inogona kusiyana zvichienderana nezvinodiwa uye kugona kwepuratifomu yakavakirwa iyo yawakavakirwa.
1 Chii chitsva muBusyBox vhezheni 1.32?
2 Ungawana sei BusyBox?
Chii chitsva muBusyBox vhezheni 1.32?
Mune iyi vhezheni itsva, tinogona kuona kuti murairo mutsva wakawedzerwa mim kumhanyisa zvinyorwa kubva kune yakapihwa Mimfile faira (zvimwe zvinoyeuchidza nezve truncated ita utility).
Chikamu chakakura che inogadzirisa mumadota uye hush repository mirairo, nechinangwa chekuvandudza kugarisana nemamwe matangi. Mune madota uye hush, kugona kwekupedzisa yakavakirwa-mukati mirairo ine tabo yakawedzerwa. Ash yakagadzika mitsva yakavakirwa-mukati.
Mukushandisa wget, iyo muganho pane iyo nhamba yekudzosera yakawedzerwa uye rutsigiro rwakaitwa kuti riongorore zvitupa zveTLS kana zvikakundikana ne ENABLE_FEATURE_WGET_OPENSSL.
Nguva zve fdisk zvinoshandiswa, ikozvino mune iyi vhezheni itsva yakawedzera rutsigiro rweHFS uye HFS + zvikamu. Init, kubata kwemamiriro ezvinhu emujaho kana ma sign achisvika akagadziridzwa.
Iyo "% NT" yekubuda fomati yakawedzerwa kune iko kushandiswa kwekutarisa kwekutarisa kwe nmeter system parameter.
Mu httpd, kana uchishanda muNOMMU modhi, kumisikidza dhairekitori repamba rinotenderwa uye iyo '-h' sarudzo inogoneswa panotangwa maitiro ekumashure.
Fixed bugs mukati zvinoshandiswa grep, kumusoro, dc, gzip, awk, bc, ntpd, pidof, stat, telnet, tftp, whois, unzip, chgrp, httpd, vi, nzira.
Sarudzo ye "-kuregedza" yakawedzerwa kune yekushandisa yekushandisa kutarisa mafaira asina chinhu.
Grep yakawedzera chaiyo rutsigiro rwepateni runyorwa (pateni runyorwa) uye yakawedzera "-R" sarudzo (inodzokororazve kugadzirisa zvinyorwa zvemukati).
Matambudziko anoonekwa panguva yekusangana muClang 9 akagadziriswa uye yambiro dzekunyora dzinobviswa.
Wakawedzera kugona kugadzirisa uye kuverenga CPU mune task set ("-c" sarudzo).
Hunhu hwe "-a" Sarudzo hwachinja mu tar, iyo pachinzvimbo chekugonesa "lzma" compression yava kusanganisirwa ne otomatiki kuona nefaira yekuwedzera.
Udhcpc6 yakawedzera tsigiro yemamiriro asina kuverengerwa DHCPv6 (Iyo sevha inopa chete network parameter, isina kupa kero).
Nslookup inopa mhinduro kugadzirisa pasina RR zvinyorwa uye inowedzera rutsigiro rweRRV zvinyorwa.
Yakawedzerwa nyowani "showmacs" uye "showstp" mirairo kuna brctl.
Wakawedzera rutsigiro rwe "relay server" paramende mu dhcpc.
Syslogd yakawedzera mamiriro ekuratidzira nguva ne millisecond chaiyo.
Xargs inobvumidza kubata kweakakokorwa nharo, uye hunhu hunhu hweiyo "-n" sarudzo inovimbiswa.
Chekupedzisira, kune avo vanoda kuziva zvakawanda nezve kuburitswa kweshanduro iyi nyowani ye BusyBox 1.32, Unogona kuwana ruzivo nekuenda ku inotevera chinongedzo.
Ungawana sei BusyBox?
Kana iwe uchifarira kugona kuwana iyi nyowani vhezheni. Unogona kuzviita nekuenda ku webhusaiti yepamutemo yeprojekti kwaunowana mukati mayo chikamu chekurodha pasi zvese zviri kodhi kodhi yeizvi, pamwe nemabhinari uye zvinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » BusyBox 1.32 iri pano uye idzi ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo
Ndiani anofarira kuve ne server smtp ssh sftp nezvimwewo nezvimwewo
inowanikwa kune vekutanga vanogona kunge vakawedzera mukana, kungave kwenzvimbo kana kure ???
Kana ndiri ini, iko kusave nechombo chemhondi mumba mako, kumirira iyo
rova murume kuti akuuraye nezvombo zvako ... ngatitii ipfumo rinocheka nekwose.
Ini handidi izvo, ini ndoda masevhisi andinogona kutanga uye kutanga nemaoko uye ayo akachengetedzwa zvakanaka
yekutumira kwemaitiro angu, uye kana iri muchikamu chekunyora-chekunze chete ... zvirinani.